INkosana uHarry kunye noMeghan Markle bonwabile ngokunika u-Archie umntakwabo - Indumasi
Eyona Indumasi INkosana uHarry kunye noMeghan Bakuvuyela kakhulu ukunika u-Archie umntakwabo
INkosana uHarry kunye noMeghan Bakuvuyela kakhulu ukunika u-Archie umntakwabo
INkosana uHarry kunye noMeghan Markle bonwabile malunga nokuba nomntwana wesibini.Ngokunyanisekileyo uMisan Harriman
Ngomhla weValentine, iNkosana uHarry kunye noMeghan Markle babhengeze iindaba ezimnandi zokuba balindele umntwana wabo wesibini. I-Duke kunye neDuchess yaseSussex bonwabile ukuba baya kuba lusapho lwabane, kwaye bonwabile kakhulu ukuba bakwazi ukuphinda bakhulelwe emva kokuphulukana nokuphuma kwesisu kwihlobo elidlulileyo.
INkosana uHarry kunye noMeghan babekhathazekile yile lahleko, kodwa ngoku Abantu , bahlala benethemba lokuba baya kuphinda bakhulelwe. I-Duke kunye neDuchess bonwabe kakhulu ukuba yenzeke ngokukhawuleza, kuba bahlala befuna ukunika unyana wabo, u-Archie, umntakwabo osondeleyo kwiminyaka yakhe.
Bhalisela iNcwadana yeRoyals yoMqwalaseli AbakwaSussex abanakulinda ukunika u-Archie umntakwabo.UToby Melville - Iphuli / imifanekiso kaFetty
Ama-50 nangaphezulu indawo yokuthandana
AbakwaSussex bonwabe kakhulu kukuba u-Archie azakuba nomntakwabo, kuba kudala beceba ukuba nabantwana ababini. U-Archie uguqula iminyaka emibini ngoMeyi, kwaye ngelixa iNkosana uHarry kunye noMeghan bengakhange baxele naziphi na iinkcukacha, uxelele umthombo wasebukhosini Ngeveki ukuba uMeghan ulindelwe entwasahlobo.
Ukuba yinyani, oko kuthetha ukuba u-Archie uya kuba malunga neminyaka emibini emdala kunomntakwabo omncinci, malunga nesithuba seminyaka efanayo INkosana uHarry kunye neNkosana uWilliam . UHarry noMeghan sele bekwindlela yokuzalela.LIPINSKI YOLAWULO / AFP / imifanekiso kaFetty
INkosana uHarry kunye noMeghan bonwabile kukukhulelwa, nangona kufanelekile ukuba bobabini babenovalo emva kokuphuma kwesisu kunyaka ophelileyo. Kwabathatha ithutyana ngaphambi kokuba baphumle ngokupheleleyo kwaye bonwabele oku kukhulelwa, nge Abantu , kodwa ngoku bakwazile ukuyamkela yonke.
I-Duke kunye neDuchess yaseSussex ikwimo epheleleyo yokuzalela, kwaye sele iqalile ukuyila i-nursery kwikhaya labo lokulala elithoba iMontecito , apho kukho indawo eninzi yokudlala abantwana babo. Ewe, kwangoko xa befika kwindlu enkulu yaseSanta Barbara, iNkosana uHarry kunye noMeghan baqinisekisa ukuba kukho iindawo ezizodwa zoVimba, kubandakanya indawo yokudlala ngaphandle. U-Archie ujika amabini ngoMeyi.I-Duke yaseSussex / @ GcinaChildrenUK nge-Getty Izithombe
iinkampani zonxibelelwano phakathi koluntu new york
Ngelixa abakwaSussex bethe cwaka malunga nokukhulelwa ukusukela oko kutyhilwa okukhulu, ababukeli basebukhosini abanomdla banokufumana ulwazi ngakumbi ngosana lwasebukhosini kungekudala, njengoko iNkosana uHarry kunye noMeghan behleli phantsi kudliwanondlebe olukhethekileyo kunye no-Oprah Winfrey oza kuhanjiswa ngoMatshi 7 , kunye ne-Oprah pal pal kaGayle King, akukho nto imiselweyo.
Njani 'iBoJack Horseman' yeXesha lesi-5 ifumana uKomidi xa ejongene neNtlekele
Iifilimu ezili-10 eziNenzuzo kakhulu ngo-2018
Oopopayi Baye baba liXesha leMfazwe eliKhulu leeMfazwe eziSasazayo
san diego zoo panda igama
Imuvi yasebukhosini ebusuku
Iimfazwe ezintsha zeenkwenkwezi zemihla yokukhutshwa kwe-movie
ujonga njani inombolo yefowuni simahla
Imbewu yentsangu iyathengiswa eCanada